‘Abahlonishwe abadala’ - ungqongqoshe | News24
‘Abahlonishwe abadala’ - ungqongqoshe
PHOTO: thami ka-nkosiLezi ngezinye zezikhulu ebezikhona kade kubanjwe iphalamende labantu abadala (kwesobunxele) Velaphi Phatho, Ndabenzima Dayi kanye noPhumephi Ngwazi
UNGQONGQOSHE wezenhlalakahle uNkk. Weziwe Thusi ukhwele wadilika kubashayeli bamatekisi abahlulekayo ukuphatha kahle abantu abadala uma begibele ematekisini abo. UThusi ukhulume ngoLwesihlanu olwedlule ngesikhathi kunephalamende labantu abadala ezinkundleni zemidlalo ePort Shepstone. Izaguga zidele imvula nodaka ukuba zizoba ingxenye yalezi zingxoxo.
Uthi kuyomele abanikazi bamatekisi babhekisise uma beqasha abasebenzi ukuthi banaso yini isineke sokusebenza nabantu abadala ngoba abanye babo sebeguge kakhulu futhi bayakudinga ukuba bathole ukuphathwa ngendlela efanele.
Umeya wamasipala wasogwini uCllr Mondli Chiliza uthe ukunakekelwa kwabantu abadala kusho ngokusobalala ukuthi uhulumeni uyanakekela futhi ubakhathalele labo asebethanda ukukhathala emzimbeni .
“Masikusho lokhu ngokukhulu ukungahlonizi ukuthi ukuze isizwe sibe ngesihle futhi esiphusile kumele kuhlonishwe labantu abadala ngoba isizwe esingabahloniphi asiphumeleli.
Kuleli phalamende elithathe izinsuku ezimbili kuphinde kwadingidwa kabanzi ngeqhaza abantu abadala abasangalidlala ekuthuthukiseni isizwe kanye nokubuyisa ubumbano esizweni.
Nakuba izinkulumo zona zibe nohlonze kodwa ukungaqapheli kwabahleli bomcimbi ikona okufike kwaqashewla kakhulu ngabanye njengalokhu kubekhona izikhalazo ngendawo ehlonziwe ukuthi kwenziwe kuyina lomcimbi.
Abantu abebehambele lomcimbi bebexova udaka izimoto zingakwazi nokungena lokho kwaholela ekutheni abantu abadala bashiywe ngaphandle betabhale ngonyawo kuze bagcine befikile kulomcimbi.